Omdala Android Imidlalo - Omdala Porn Imidlalo, XXX Imidlalo i-Intanethi
Omdala Android imidlalo njengoko indlela ukubulala ixesha lakho
Ukuba ukhe ubene ikhangela eyona omdala Android imidlalo ezikhoyo kwi-Google Dlala-Store, kukho izinto ezininzi ngayo kuwe. Ngaba ukhe ubene entsha kwi-Android ehlabathini kwaye kufuneka eminye imidlalo ukufumana waqala neqabane lakho Google Dlala library okanye nje ukukhangela imihla trendy imidlalo kukunceda kakhulu ixesha lakho, kukho into kuba wonke umntu. Kunjalo, zikhathalele yakho nokhuseleko kunye rhoqo ukumbule ukuba ezithile Android imidlalo unako eavesdrop kwi nani. Kukho iindidi ezimbini abantu: abo dlala omdala Android imidlalo efowunini kwaye abo ukuxoka xa bathi babe musa ukudlala ezi imidlalo., I-imidlalo ingaba zininzi kakhulu, kwaye ngamanye amaxesha ke nzima ukufumana enye ukuba eyona suits yakho sensibility. Nangona iinkqubo ezintsha ingaba conquering yentengiso mini emini, zisekhona abanye ubudala nezinamandla, apho basenokuba evergreen kwaye ayinakuze wawulahla umphefumlo wabo popularity.
Yintoni yenza omdala Android imidlalo ngoko ke addictive? Kululuvo ibali, imizobo, okanye ingaba abantu njenge-siseko umdlalo? Kubalulekile idla umcimbi yomdlalo ke icala, oko kukuthi, malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-ukudlala lo gama ulinde ibhasi ngomhla sovavanyo okanye nayiphi na enye imeko xa ungenaso kakhulu kakhulu ixesha ukudlala. Ingaba okruqukileyo kwi mgqibelo busuku? Okanye mhlawumbi ukhe ubene ezama ukubulala abanye ixesha ngeli relaxing ukwikhefu. Akukho mcimbi apho unoxanduva kwaye nokuba awufuni, omdala Android imidlalo ezimbini ingaba omnye eyona iindlela ukuze wonwabe yakho kubasindisa ixesha., I-Android mgangatho ukhona nakowuphi chu kodwa ngokuqinisekileyo ukuseka ngokwalo njengoko egqibeleleyo gaming iqonga, oko kusenokuba ebone ukususela kunyaka ophelileyo. I-Google Dlala-Store app uzele imidlalo. Abanye ngabo kakhulu ezilungileyo, abanye ingaba nje wesiqhelo, ngeli lixa abanye belong ukuya phezulu kakhulu kwaye unako compete nkqu kunye amaphawu kuba "ezinzima" - consoles kwaye Windows iikhompyutha.
Omdala Android imidlalo ingaba kuba ngabantu abadala kuphela
Ungaya kanye, kwenye indawo, kuvakala i-Isijapanese umdlalo Rapelay. Incredible uthuli yenyuka jikelele umdlalo ngo-2009 (iminyaka emithathu emva yayo ukukhutshwa kulo Sasejapan) ngenxa yokuba ubeke abadlali kwi-indima ebizwa-stalker - ukuba awkward umntu lowo uhamba phezu jikelele a raincoat kwaye ngolu hlobo lulandelayo i-girls ukuba... Hayi zichaza ngendlela inkcukacha, uyakwazi guess kuba ngokwakho kutheni lo mdlalo sele earned phantse i-global iintengiso ban. I-studio ngasemva umdlalo, Illusion, ngu ndivuma lokuqala okanye ixesha lokugqibela ukwenza i - "eroge" umdlalo kunye squint-eyed beauties njengoko i-object ka-umsebenzi kuba i-18+ ababukeli bomdlalo bangene., Ngaphezu koko, ukusukela ngo-1997, baya kuba bakhululwe ngaphezulu kwama-20 imidlalo kwaye zithe officially ukugxotha ukusuka uthengisa ngaphandle Ejapan. Kwaye ngoko, baye bamfumana onesiphumo inyaniso kwaye wenza Nobusi Khetha.
Kengoko nkqu kufuneka emphasize kutheni lo mdlalo uza zange kuba ubonile kwi-store ngaxalimbi, okanye uza kuwe ngonaphakade ufuna ukudlala ngayo ngaphambili yabanye abantu ukuba ufumane oko kwaphela. Nobusi Khetha yenzelwe kuba HTC Vive kwaye sele ngoko kude kakhulu complex isixhobo wokwenza iimpawu, ngakumbi precisely, i-aforementioned squint-eyed beauties esabelana wena ke "beka phantsi ngaphandle" kwi-onesiphumo inyaniso., Kwaye izakuba zonke kusala ukuba "omnye umdlalo kuba andwebileyo Isijapanese" ukuba weren khange ngenxa yokuba konke kwaba powered by kwimo-ka-i-unguye imizobo injini kwaye ukuba ukongeza onesiphumo inyaniso made abadlali bazive ngathi onesiphumo ladies baba ekunene kwi-phambili kubo.
Njengoko engaqhelekanga kwaye okungekuko njengoko kunokubonakala kuthi ngaphandle Japan, umdlalo ufumana i-unprecedented betha ukuba sele mbasa a revolution kwi-VR kwaye omdala entertainment ishishini. Yinyani, kuya ubani barrier ka-phantse 100 euros dibanisa astronomical ixabiso a Vive imiselwe kwaye i-PC ukuba uza qhuba ke bonke satisfactory yokusebenza. Nangona kunjalo, siya uphumelele khange abe surprised ukuba imidlalo efana nale zisuke a widespread ifomu VR-software kwaye lotshintsho esi sicwangciso 18+ wefilim ishishini kwi ezimbalwa eminyaka. Ngoba, yintoni elandelayo inyathelo ukuba awukwazi kuphela khangela yakho phupha kubekho inkqubela kodwa kanjalo uyilo ngayo ngokwakho?
Eyona omdala Android imidlalo ungafumana
Kuba abanye, lo "elinovakalelo" topic, abanye jonga kulo lonke ibali njengokuba maturation nkqubo, kwaye abanye musa ufuna ukuva ngalento. Nangeyiphina indlela, lo mbhalo ukuba nenzuzo wonke umntu. Abo "elinovakalelo" uza funda into entsha, abo kuqwalasela ukuba kuyinto ukuze inkqubo iya kwazi njani lokucebisa "indalo" iintloko, kwaye abo musa ufuna ukuva malunga konke oku kuya ukufunda apho izicelo ukuhlala kude kwaye apho izicelo jonga kuba xa qala inspecting i izixhobo zabo abantwana, partners, njalo-njalo., I-omdala ishishini sesinye likhulu kwaye uzile-lokukhula imizi-mveliso ehlabathini. Kukho 11,000 porn iimifanekiso ngaphandle ngomhla we-wonke 400 Hollywood amaxwebhu, kwaye imihla ulwazi ukusuka PornHub ithi Android abasebenzisi ingaba enkulu inxalenye yabo ababukeli bomdlalo bangene. Ingaba oku kukhokela ukuba umbuzo ka-eyona omdala Android imidlalo ukuba Android abasebenzisi unako ukudlala?
Ukuba ufumana i-kunzima umbuzo, kodwa sinako ngxi kukunika abanye uncedo ngokukuvumela ukuba oko omdala Android imidlalo ukuphepha, kwaye omnye kubo CyberFuck, apho kufuneka enxulumene ne-RPG Cyberpunk 2020. Imiyalelo bathethe malunga satisfying abafazi. Nangona kunjalo, nangona ezi kakhulu ngesondo imiyalelo, lo mdlalo we fucking puzzles. Ukuba unayo akukho unye malunga puzzles, nakanjani uza ukulawula ukufa isombulula omnye kubo. Gotham Sluts, obubonakalayo samkele phakathi omdala Android imidlalo, ubuncinane oninika nethuba ukubona abanye ngesondo., Catwoman, Tyhefu Ivy, kwaye Harley Quinn balwe kunye Batman kwi ezimbalwa ezahluka-foto. Ke nzima ukuba zichaza, kodwa kuphela into yokuba ihambisa apha kukho tits ukuba ukutsiba phezulu kwaye phantsi, ngokunjalo njengoko dick, kwaye kuphela xa sihamba phezulu kwaye phantsi kunye isalathisi. Lento njenge umboniso ncwadi. Efana nezinye visual novels, lo mdlalo hayi overly nabafana kwaye yenza wena nqakraza nge-elula plots.